Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ndị njem na -eleta Hawaii n'ụba mana ha na -emefu obere ego
Ogologo ahịrị maka udon noodles na Waikiki
N'agbanyeghi na ọtụtụ ndị njem ka na -enubata n'agwaetiti Hawaii, ha na -eji obere ego abịa n'akpa ha na -amachi mmefu ha mgbe ha na -ezumike. Nke ahụ nwere ike bụrụ ihe kpatara ahịrị na ebe noodle dị ọnụ ala na ụlọ ahịa dị mma na -adị ogologo karịa ka ha nọ na ebe dị ka ụlọ ọrụ Cheesecake. Mmefu maka July 2021 gbadara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 7% site na ọkwa pre-COVID-19 na July 2019.
Tupu COVID-19, Hawaii nwere mmefu mmefu nke ndị ọbịa na mbata na 2019 na ọnwa abụọ mbụ nke 2020.
Na July 2019, mmefu ndị ọbịa belatara ijeri US $ 1.7, mbelata nke 6.8%.
Ka ọ na-erule Julaị nke 2020, enweghị ọnụ ọgụgụ dị na mmefu ndị ọbịa n'ihi na enweghị nyocha nyocha ọpụpụ n'ihi mgbochi COVID-19.
“Ọ bụrụ na anyị nwere ike ijikwa ma chịkwaa mgbasa nke Delta n'ụzọ dị mma yana mmetụta ọjọọ na sistemụ nlekọta ahụike anyị, anyị nwere ike ịtụ anya njem, gụnyere njem mba ofesi, ịmalite ịlaghachi azụ n'etiti ọnwa Nọvemba wee gaa n'ihu na-eto site na Oge njem ezumike na Disemba 2021 wee gaa n'ihu na Jenụwarị, Febụwarị na Machị nke 2022, "Mike McCartney, onye isi ngalaba azụmahịa, mmepe akụ na ụba na njem (DBEDT) na Onye isi ala gara aga na onye isi nke Hawaii Tourism Authority (HTA) kwuru.
Dika onu ogugu ndi nleta nke Ngalaba Azụmaahịa, Mmepe akụ na ụba na njem (DBEDT) wepụtara emefu site na ndị ọbịa ibute na July 2021 bụ ijeri $ 1.58.
Tupu ọrịa COVID-19 zuru ụwa ọnụ na Ihe mgbochi Hawaii chọrọ maka ndị njem, Agwaetiti Hawaii nwere mmefu mmefu nke ndị ọbịa na mbata na 2019 na ọnwa abụọ mbụ nke 2020. Nkọwa, July 2020 ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na-emefu ego adịghị n'ihi na enweghị nyocha ọpụpụ n'etiti Eprel ruo Ọktoba 2020 n'ihi COVID-19. mgbochi. Mmefu ndị ọbịa belatara ma e jiri ya tụnyere ijeri $ 1.70 (-6.8%) na July 2019.
“Akụ na ụba Hawaii nọ n'ụzọ doro anya maka mgbake wee na -enweta ike n'ime ọnwa asaa mbụ nke 2021. Anyị nwetara mmefu siri ike na mbata na July site n'ahịa US gafere ọkwa 2019 site na pasent 29 (+ $ 339.3 nde) maka mmefu na pasent 21 (+ 145,267) maka ndị mbata. Onye ọbịa Hawai'i na United States na -emefu ihe dị ka $ 113 kwa onye ọ bụla na njem ọ bụla na 2021, ”McCartney kwuru.
“A na -enyere ọnụ ọgụgụ ndekọ ndị a aka site na ịrị elu nke ndị na -azụ ahịa, mbubata ụgbọ elu, nhọrọ pere mpe maka njem ezumike mba ofesi na nnabata nke ego mkpali gọọmentị. Ọnụego mgbake niile n'ọnwa Julaị bụ pasent 88 ebe ndị mbata mba ofesi pere mpe (pasent abụọ), "ka ọ gbakwụnyere.
Ngụkọta nke ndị ọbịa 879,551 ji ụgbọ elu rute agwaetiti Hawaii na July 2021, nke sitere na US West na US East. Naanị ndị ọbịa 22,562 (+3,798.4%) ji ụgbọ elu rute na Julaị 2020. Ndị bịara mbata na Julaị 2021 jụrụ ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa 2019 (-995,210%) n'ọnwa Julaị 11.6.
N’ọnwa Julaị 2021, ọtụtụ ndị njem na-esite na steeti na-eme njem ma na-ejegharị ejegharị na-eme njem nwere ike ịgafe ịpụ iche ụbọchị iri nke steeti nwere ezigbo nyocha COVID-10 NAAT sitere na onye otu nnwale tụkwasịrị obi tupu ọpụpụ ha na Hawaii. site na mmemme Njem Nchekwa. Na mgbakwunye, ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi ọrịa na United States nwere ike gafere usoro ịpụ iche na-amalite na July 19. Enweghị mgbochi njem n'etiti mpaghara na July. Centlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa US (CDC) na-amachibido mmachi n'ụgbọ mmiri site na '' Usoro Ọdụ Ụgbọ mmiri '', usoro dị mkpa maka ịmaliteghachi ụgbọ njem ndị njem iji belata ihe ize ndụ nke ịgbasa COVID-8 n'ụgbọ.
Nkezi ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na -eme kwa ụbọchị bụ ndị ọbịa 265,392 na July 2021, ma e jiri ya tụnyere 17,970 na July 2020, na 286,419 na July 2019.
N'ọnwa Julaị 2021, ndị ọbịa 578,629 sitere na US West, nke dị elu karịa ndị ọbịa 12,890 (+4,388.9%) na July 2020 wee karịa ọnụ ọgụgụ ndị July 2019 (+462,676%). Ndị ọbịa US West nọrọ $ 25.1 nde na July 961.0, nke karịrị nde $ 2021 ( +669.8%) nọrọ na Julaị 43.5. Ọnụ ego ndị ọbịa na -eme kwa ụbọchị dị elu ($ 2019 kwa mmadụ, +186%) na ogologo ogologo ogologo ọnụnọ (ụbọchị 12.4, +8.95%) nyekwara aka na uto na mmefu ndị ọbịa US West ma e jiri ya tụnyere 2.1.
Enwere ndị ọbịa 272,821 si US East na July 2021, ma e jiri ya tụnyere ndị ọbịa 7,516 (+3,530.0%) na July 2020, yana ndị ọbịa 243,498 (+12.0%) na July 2019. Ndị ọbịa US East nọrọ $ 558.8 nde na July 2021 ma e jiri ya tụnyere $ 510.7 nde ( +9.4%) na Julaị 2019. Ogologo ọnụnọ ogologo (ụbọchị 9.94, +2.6%) nyekwara aka na mmụba nke mmefu ndị ọbịa US East. Mmefu kwa ụbọchị ($ 206 maka otu onye) dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere July 2019 ($ 216 kwa mmadụ).
Enwere ndị ọbịa 2,817 si Japan na July 2021, ma e jiri ya tụnyere ndị ọbịa 54 (+5,162.0%) na July 2020, na ndị ọbịa 134,587 (-97.9%) na July 2019. Ndị ọbịa si Japan mefuru $ 11.2 nde na July 2021 ma e jiri ya tụnyere $ 186.5 nde (- 94.0%) na July 2019.
Na Julaị 2021, ndị ọbịa 1,999 si Canada bịa, ma e jiri ya tụnyere ndị ọbịa 94 (+2,018.9%) na July 2020, na ndị ọbịa 26,939 (-92.6%) na July 2019. Ndị ọbịa si Canada mefuru $ 5.5 nde na July 2021 ma e jiri ya tụnyere $ 50.1 nde (- 88.9%) na July 2019.
Enwere ndị ọbịa 23,285 sitere na Ahịa mba ụwa niile na July 2021. Ndị ọbịa a sitere na Guam, Asia ndị ọzọ, Europe, Latin America, Oceania, Philippines, na agwaetiti Pacific. Na ntụnyere, enwere ndị ọbịa 2,008 (+1.059.5%) sitere na Ahịa mba ụwa niile na July 2020, yana ndị ọbịa 127,510 (-81.7%) na July 2019.
Na July 2021, ngụkọta ụgbọ elu 6,275 trans-Pacific na oche 1,292,738 jere ozi na agwaetiti Hawaii, ma e jiri ya tụnyere naanị ụgbọ elu 741 na oche 162,130 na July 2020, karịa ụgbọ elu 5,681 na oche 1,254,165 na July 2019.
N'ime ọnwa asaa mbụ nke 2021, mmefu ndị ọbịa bịara bụ ijeri $ 6.60. Nke a nọchiri anya mbelata pasent 37.5 site na ijeri $ 10.55 nke emere n'ime ọnwa asaa mbụ nke 2019.
Ngụkọta ndị ọbịa 3,631,400 bịarutere n'ọnwa asaa mbụ nke 2021, mmụba nke pasent 66.7 site n'afọ gara aga. Mkpokọta ndị bịarutere dị pasent 41.1 dị ala ma e jiri ya tụnyere ndị ọbịa 6,166,392 n'ime ọnwa asaa mbụ nke 2019.
“Ka anyị na -emecha oge ọkọchị dị elu ma na -abanye n'oge mgbụsị akwụkwọ nwayọ nwayọ, anyị ga -enwe mbibi ebumpụta ụwa nke ndị si n'ahịa US bịa n'oge oge ubu ọdịnala a. N'ime oge a, anyị enweghị ndị mbata mba ofesi atumatu atumatu, yabụ a na -atụ anya na ọ ga -eji nwayọ karịa nke nkịtị maka ahịa niile. A na-atụkwa anya na ahịa a ga-adị nro ka anyị na-ahụ mbelata nke ịgba akwụkwọ ọdịnihu n'ihi ejighị n'aka e kere gburugburu ụdị COVID-19 Delta. Anyị na -atụ anya na ndị mbata ga -eji nwayọ na Septemba na Ọktọba malite mgbe ngwụcha ụbọchị ndị ọrụ. Ndị mbata nwere ike mikpu n'etiti ihe dị ka pasent 50 ruo pasent 70 nke ọkwa 2019, "McCartney kwubiri.